महिलाको ओठमा आएको रौं हटाउने घरेलु उपचार
मे 22, 2019 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	ओठ, महिला, रौं
प्रायजसो दारी जुँगा पुरुष मानिसको आउने गर्छ तर कतिपय महिलाको पनि माथिल्लो औठमा जुंगाको रेखी जस्तो देखिने कालो जुंगाको रेखा देखिन्छ । यी रौं पुरुषको जस्तो ठूलो नभए पनि महिला अनुहारमा अस्वभाविक देखिन्छ । महिलाको शरिरमा पुरुष हर्मन एन्ड्रोजन बढी भयो भने यो समस्या देखिन्छ । यो हर्मनले ओठ लगायत महिलाका शरिरभर रौं पलाउछ । एशियाली र अफ्रिकी मुलका महिलामा यस्तो समस्या बढी देखिन्छ । त्यस्तै वंशानुगत समस्याका कारण पनि महिलामा बढीमा मात्रामा रौं पलाउछ । कुनै निश्चित औषधीको अशर र पोलिसाइटिक ओभरी सिन्ड्रोम (पीओएस) ले पनि केही महिलाको अनुहारमा रौं पलाउछ । महिलाको ओठमा आएको रौं हटाउने घरेलु उपचार निम्न अनुसार छन् ।
महिलाको शरीरमा अनावश्यक रौँ आउने कारणहरु
जुत्तामा मोजा लगाउँदा खुट्टा गन्हाउँने हटाउने उपायहरु
जाडोमा हिटर ताप्दा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक कुराहरु
१. दुध र बेसार
दुध र बेसारको प्याकले ओठको अनावश्यक रौ हटाउन सकिन्छ । एक चिया चम्चा दुधमा एक चिया चम्चा बेसारलाई मिसाएर बनाएको पेस्टलाई रौ आएको ठाँउमा दलेर आधा घन्टापछि चिसो पानीले पखाल्दा लामो समय रौं पलाउदैन ।
२. पानी र बेसार
दुधको सट्टा पानी नै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो उपाय निकै प्रभावकारी हुन्छ । दुई चम्चा बेसारलाई दुई चम्चा पानीमा मिसाएर बनाएको पेस्टलाई राम्रोसँग मिसाएर माथिल्लो ओठमा दल्दा यसले अप्रत्यासित परिणाम दिन्छ । पेस्टलाई करिब ३० मिनेटसम्म ओठमा राखेर बिस्तारै घोट्नुपर्छ । आधा घन्टापछि बिस्तारै चिसो पानीले पखाल्नुपर्छ ।
३. अन्डाको सेतो भाग
अन्डाको सेतो भाग दलेर पनि रौं हटाउन सकिन्छ । अन्डामा प्रोटिनको मात्रा बढी हुन्छ जसले छालालाई धेरै फाइदा गर्छ । एक चम्चा सेतो अन्डालाई एक चम्चा चिनी र एक चम्चा गहुको पिठोमा मिसाएर बनाएको पेस्टलाई माथिल्लो ओठमा लगाएर आधा घन्टपछि सो पेस्ट उक्काउदा लामो समयसम्म रौं आउदैन् ।
← वास्तुशास्त्रका यी ८ उपाय अपनाएमा चम्किनेछ तपाईको भाग्य
भएको छ परिवर्तन →
नोभेम्बर 26, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0
महिलालाई मलामी नलानुको कारणहरु
नोभेम्बर 13, 2016 नोभेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक	5
नोभेम्बर 29, 2018 नोभेम्बर 29, 2018 साइन्स इन्फोटेक	3
सरिफा खानुका फाइदाहरु
संसद बैठकको अध्यक्षता गर्दै नेपा: पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी